သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သွေးလွှတ်ကြောအတွင်း သွေးခဲပိတ်ဆို့ခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များသော အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အရေးကြီးသည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများသို့ သွေးထောက်ပံ့ မှုပြတ်တောက်သွားစေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
1. ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ခြင်း (Heart Attack) - နှလုံးသို့သွေးစီးဆင်းမှုရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. လေဖြတ်ခြင်း - ဦးနှောက်သို့ သွေးထောက်ပံ့နေသောသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
3. သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းသောရောဂါ - သွေးကြောနံရံများတွင် အဆီများစုပုံခြင်းကြောင့် ခြေသလုံးကြွက်သားများသို့ သွေးရောက်ရှိမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ သွေးကြောကျဉ်း၍ သွေးကြောများ ပျက်စီးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အဆီများစုပုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆီဖတ်များသည် သွေးကြောနံရံများ၌ တွယ်ကပ်နေခြင်းကြောင့် နံရံများတဖြည်းဖြည်းထူလာပြီး သွေးကြောများကျဉ်းလာရပါသည်။ ၎င်းအဆီဖတ်များပေါက်ပြဲသွားပါက သွေးခဲဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမိုမြင့်တက်လာပါသည်။ ထို့ပြင် -
- အဆီများစွာပါ၀င်သော အစားအသောက်များကိုစားသုံးခြင်း
- အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း (အမျိုးသားများတွင် တစ်နေ့လျှင် 3-4 ယူနစ်ထက် ပိုမိုသောက်သုံးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် တစ်နေ့လျှင် 2-3 ယူနစ်ထက် ပိုမိုသောက်သုံးခြင်း)
- ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း (အမျိုးအစား 1 သို့ 2)
- သွေးတွင်းအဆီဓာတ် (ကိုလက်စထရော) များခြင်း
သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခွဲစိတ်ခြင်း (သို့) ဆေးဝါးများအကူအညီဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
အချို့သောဖြစ်စဉ်များတွင် သွေးခဲပျော်ဆေးဟုခေါ်သော ဆေးတစ်မျိုးဖြင့် သွေးခဲများကိုပျော်စေပြီး သွေးလွှတ်ကြော အတွင်း သွေးစီး ဆင်းခြင်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းဆေးများသည် ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ခြင်း (သို့) လေဖြတ်ခြင်းရောဂါေ၀ဒနာခံစားရပြီးပြီးခြင်းပေးပါက ပိုမိုအစွမ်းထက်နိုင်ပါသည်။
ပိတ်နေသောသွေးကြောကို ပြန်ပွင့်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) လမ်းလွှဲတည်ဆောက်ခြင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိရာ ပိတ်နေသောသွေးကြောနေရာနှင့် ပြင်းထန်မှုအနေအထားပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သော ခွဲစိတ်နည်းကိုရွေးချယ်လေ့ရှိကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့် သွေးခဲသည် နှလုံးကိုထောက်ပံ့နေသော သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းပိတ်နေပါက နှလုံး ခွဲစိတ်မှုကိုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ -
Stent ထည့်ခြင်း - နှလုံးသွေးကြောအတွင်း stent ဟုခေါ်သော ပြွန်တစ်ခုထည့်၍ သွေးကြောချဲ့ခြင်းနှင့်ထပ်မံ၍ မဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ခြင်း
နှလုံးလမ်းလွှဲတည်ဆောက်ခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားနေရာမှ သွေးကြောတစ်ခုကိုယူ၍ ပိတ်နေသောနေရာတွင် လမ်းလွှဲအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း
အကယ်၍ သွေးခဲသည် လည်ပင်းနားတစ်၀ိုက်တွင် ပိတ်ဆို့နေပါက လည်ပင်းသွေးကြောရှိသွေးခဲကိုဖယ်ရှားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သွေးခဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဟန့်တားရန် လုံး၀ဥသုန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလျော့ချရန်မူ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်သွေးခဲပိတ်ဆို့ခြင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါက ဆေးဝါးများအကူအညီဖြင့် ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါသည်။
1) အဆီကျဆေး - သွေးတွင်းအဆီ (ကိုလက်စထရော) ပမာဏကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။
2) သွေးခဲဖြစ်ပေါ်မှုကို ဟန့်တားနိုင်သောဆေးများ - ဥပမာ Warforin, aspirin, clopidegrel
သွေးလွှတ်ကြောအတွင်း သွေးခဲဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချနိုင်ရန် -
2) အငန်ဓာတ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်း
3) ပြည့်၀ဆီပါ၀င်သော အစားအသောက်များကိုရှောင်ရှားခြင်း